Akụkọ - ịkpachapụ anya maka ojiji na ndozi nke alumina gwakọtara ọcha
Ihe ngosi otu
Alumina White Fused
Okpokoro siri ike Corundum
Ejikọtara Alumina Magnesia Spinel
Alumina Monocrystalline Fused
Ụlọ ọrụ mmepụta & ahịrị mmepụta
Nlezi anya maka ojiji na ndozi nke alumina na -acha ọcha
Ụdị corundum abrasive kachasị na ụlọ ọrụ abrasive bụ ọcha alumina agbakwunyere. Ọ bụ ihe dị oke mkpa eji eme ihe na usoro mmepụta ihe. Ihu igwe adịla mmiri mmiri n'oge na -adịbeghị anya. Kedu ka anyị si eme ihe mgbochi mmiri na ndozi nke ọchaalumina agbakwunyere? Ihe na -esonụ bụ nkọwa nchịkọta akọwapụtara nke ọma:
1. Ọmarịcha arụmọrụ: WEnwere ike iji alumina hite fused maka polishing na egweri, igwe anaghị agba nchara, nchara dị elu na ọla ndị ọzọ; a pụkwara iji ya mee ihe maka ịsachasị ájá, imepụta igwe wheel, wdg; A na -ejikwa ya n'ọtụtụ ngwa seramiiki dị ka nkedo nkenke, ihe na -agbanwe agbanwe nchara, ihe na -emebi kemịkal, poselin eletriki 95, poselin ịchọ mma na poselin maka ndụ kwa ụbọchị.; yana ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị ka ụlọ ọrụ ndị agha na elektrọnik. Ike nke alumina na -acha ọcha nwere ntakịrị dị elu karịa nke corundum aja aja. Ọ nwere ntakịrị ike siri ike, ịdị ọcha dị elu, ịdị nkọ nke ọma, ike egwe ihe, ike ọkụ dị ala, arụmọrụ dị elu, acid na nguzogide corrosion alkali, nguzogide okpomọkụ dị elu, na nkwụsi ike dị mma.
2. Ọgwụgwọ mmiri adịghị: Wịkpọasị alumina agbakwunyere abrasives, gụnyere ọcha alumina agbakwunyere ntụ ntụ, ọcha alumina agbakwunyere ájá, wdg. Ọ dị mkpa ka ọ bụrụ mmiri na-egbochi mmiri ma ọ bụrụ na ọ na-eji ya, na-echekwa ya kwa ụbọchị. Ka anyị nwee ike iji ya nke ọma.
3. Enwere ike izere ya: onye na -ahụ maka nchekwa na -enye ndị ọcha ọcha zuru oke alumina agbakwunyere maka njirimara dị iche iche, dị ka ịbanye n'ime mmiri, ntụpọ, ntụpọ mmanụ, wdg, na -egbochikwa iwepụta nnu ịnweta n'ime okwute, na -ebute okooko osisi ọcha ma ọ bụ nchara nchara. White corundum bụ ihe na -adịkarị mfe ịpụta ma sie ike ịzere bụ ntụpọ mmiri. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, enwere ike wepụta nsị mmiri n'ime oge ụfọdụ, mana nchapu mmiri nwere ike ọ gaghị agbacha n'okpuru ogologo oge mmiri na mmiri ozuzo. Mgbe echekwara n'ime afọ ahụ, ihe ndị nwere ntụpọ ga -enwe mmetụta na corundum na -acha ọcha, ọ bụ naanị infarction nke stomata nkume ka a ga -edozi.
Oge ezipụ: Apr-06-2021